တပ္မေတာ္ Q center မ်ားမွာ Q ဝင္လိုလ်ွင္.. – ျမန္မာသတင္းစံု
တပ္မေတာ္ Q center မ်ားမွာ
၁။ မိမိရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူွး ကို
၂။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူွး က
တိုင္းက်န္းမာေရးကို ထပ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး…
ရံုးအဖြဲ႔ ဝင္ တစ္ဦး လိုက္ပါေစလ်ွက္ …..
တပ္မေတာ္ Q စခန္းမ်ားကို လိုက္ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
* တပ္မေတာ္က လာေခၚေပးလို႔ မရပါဘူး။
တပ္မေတာ္ Q Center ေတြကို ဆက္သြယ္လို့ရမယ့္
Phone No. ေတြပါ။
Ko Thein Win Oo
ရပ်ကွက်ထဲလူသိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုမှ”ကိုဗစ် သရဲခြောက်”နေတဲ့ ရုပ်သံ
ရပ်ကွက်ထဲလူသိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုမှ”ကိုဗစ် သရဲခြောက်”နေတဲ့ ရုပ်သံ အောက်တွင် video ပါသည်…. ကျနော်တို့ အောင်မြေသာစံ ရပ်ကွက်ကတော့ စံဘဲဗျာ။ ရပ်ကွက်ထဲလူသိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတော့သရဲကခြောက်ပြီလေ။ အစောင့်တွေသနားပါတယ်ဗျာ ဘယ်လောက်ကျောချမ်းနေမလဲနော့် Video ကြည့်ရန်fဆိုတဲ့ အပြာရောင်လေးကိုနှိပ်ပါ Zawgyi Version ရပ်ကွက်ထဲလူသိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုမှ”ကိုဗစ် သရဲခြောက်”နေတဲ့ ရုပ်သံ အောက်တွင် video ပါသည်…. ကျနော်တို့ အောင်မြေသာစံ ရပ်ကွက်ကတော့ စံဘဲဗျာ။ ရပ်ကွက်ထဲလူသိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတော့သရဲကခြောက်ပြီလေ။ အစောင့်တွေသနားပါတယ်ဗျာ ဘယ်လောက်ကျောချမ်းနေမလဲနော့်